Malaysia Wants Myanmar To Address Violence Immediately | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သံဃာနှင့်ကား တူ၏။ သို့သော် ရဟန်းတို့ စောင့်ထိန်းအပ်သော သိက္ခာပုဒ်တို့ကို မစောင့်စည်း။ ထိုကဲ့သို့ ယောကျာ်းမျိုးကို လူအဖြစ်သာ ဆက်ဆံရမည်
“နှမ ရွှံ့ပိတ်နေလေတော့ ဝီရသူနဲ့ ၉၆၉ အပေါင်းအပါတို့ရေ” »
Tags: Anifah Aman, Asean, Bandar Seri Begawan, Brunei, Foreign Minister, Malaysia, Myanmar, Wunna Maung Lwin
This entry was posted on June 30, 2013 at 1:27 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.